माधव नेपाललाई राखे महेश वस्नेतले यस्तो प्रस्ताव, अब हामी तपाईको पुत्ला जलाउँदैनौं – Kavrepati
Home / राजनिति / माधव नेपाललाई राखे महेश वस्नेतले यस्तो प्रस्ताव, अब हामी तपाईको पुत्ला जलाउँदैनौं
admin July 20, 2021	राजनिति Leaveacomment 137 Views
काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का नेता महेश वस्नेतले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई सम्मानजनक वहिर्गमनको प्रस्ताव राखेका छन् । उनले एमाले पार्टी छोडेर गए आफुहरुले सम्मान गरेर विदाई गर्ने बताएका छन् । वस्नेत अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका नजिकका नेता हुन् । पार्टी भित्र बसेर पार्टी विरुद्ध खेल खेल्नुभन्दा एमाले छोडेर जान उनको सुझाव थियो ।
एमाले छोडेर गए नेपालको पुत्ला नजलाउने पनि उनले बताएका छन् । राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल अन्तर जिल्ला विशेष प्रदेश कमिटीको बिस्तारित भेलालाई सम्बोधन गर्दै नेता बस्नेतले नेपाललाई यस्तो प्रस्ताव राखेका हुन् । उनले नेपाललाई सम्मानजनक बिदाइ गर्न आफू तयार रहेको बताएका छन्।
नेपालको सुरक्षामा कोटेश्वर आसपासमा सुरक्षाकर्मीको संख्या बढाएकोमा पनि उनले आपत्ती जनाएका छन् । दुई चार वटा पुत्ला जल्यो भन्दैमा तपाईले सुरक्षा बढाउनु भयो ? उनले भने, यदि तपाईले समानान्तर गतिविधि कायम राख्नुभयो भने छोड्दैनौं ।
‘तपाईँ एमालेमा बस्न चाहनुहुन्न भने कृपया एमाले छोडनुस्। हामी पुत्ला जलाउँदैनौं। सम्मानजनक बिदाइ गर्छौ। तर, एमालेमा बसेर बर्वाद गर्नेहरुलाई युवासंघले तह लगाउनै पर्छ,’ उनले चेतावनी दिँदै भने।
Previous माधव नेपाल समूहलाई ६ मन्त्रालय, को को हुँदैछन् मन्त्री ?
Next ‘नेपाल आइडल’ छिट्टै संचालन हुने, निर्णायकहरू परिवर्तन हुँदै